Warbixin: Cabdiraxman Farole iyo Shiikh Shariif oo ku kulmay dalka Jabuuti – Gedo Times
Warbixin: Cabdiraxman Farole iyo Shiikh Shariif oo ku kulmay dalka Jabuuti
11th May 2016 admin Wararka Maanta 0
Magaalada Jabuuti ayaa habeenkii xaley 9 May,2016 waxaa kulan ku dhexmarey madaxweynihii hore ee Somaliya Shiikh Shariif Axmad iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxman Shiikh Maxamad Farole kuwasoo kuwada hadlay arrimaha Somalia.
Kulankaan oo ka dhacey Hotelka madaxweynihii hore ee Puntland ka dagan yahay magaalada Jabuuti ee Sharaton ayaa wararku sheegayaan iney diirada saarayeen arrimaha Somaliya iyo doorashooyinka la filayo iney dhacaan sanadkaan dabayaaqadiisa.
Labada Madaxweyne oo horey uga soo wada shaqeeyey nidaamkii road-Map ee looga baxayey KMG nimada islamarkaana kamid ahaa madaxdii saxiixdey heshiisyadii GAROWE1, 2 ayaa musharaxiin ka ah doorashada la filayo in Somaliya ka dhacdo sanadkaan dabayaaqadiisa.
Madaxweynihii hore ee Somalia Shiikh Shariif Axmad ayaa weli ku dhawaaqin musharaxnimadiisa balse booqashooyin kala duwan ku kala baxshey dalalka dariska la ah Somalia halka Mudane Farole horey u sheegey inuu u taagan yahay qabashada xilka Madaxweyne ee Somaliya.
Dhinaca kale ilo ku dhow labada mas’uul oo warsidaha Garowe Online la hadlay ayaa sheegey ineysan jirin warar dhowaan saxaafada lagu baahiyey oo xusayey iney ka qayb galayaan xaflada 18 MAY, 2016 ee ku beegan waqtigii Somaliland ku dhawaaqdey gooni isu-taaga.
Kulanka labadaan siyaasi ayaa ku soo beegmaya xilli ay magaalada Jabuuti kaga qayb galeen caleemo sarkii loo sameeyey Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele.
Cabdixakiim Maxamed Daahir oo Tacsida Ugaas Ciise iyo Hambalyo Maamulka Galgaduud Sarre Diraaya
Wasiirka Somaliland u qaabilsan arrimaha dibadda oo ka hadlay heshiiskii Dubai ka dhacay